Ma leedahay qaar ka mid ah MOV yaab leh (QuickTime) files laakiinse iyagu innaba ma ciyaari karaa TV ka dib markii uu isku dayayaa in dhammaan dadaalada? Dhab ahaantii, waxaa jira hab xariifnimo in si deg deg ah uga takhalusi arrimaha incompatibility ah. Si fudud iyaga loogu badalo in qaab kasta oo aad u baahan tahay, waxaa laga wmv ah, MKV ama MPEG-2 file. In si loo fuliyo shaqo diinta, waxa aad u baahan doontaa Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Barnaamijkan wuxuu qeexayaa xog, hufnaan iyo tayada. Fadlan tixraac hago hoos u tilmaamo diinta ka badan.
Download version tijaabo ah MOV ah (QuickTime) in TV Converter ah halkan:
Talooyin: Haddii file QuickTime la encoded by H.264, ka dibna waxaad dooran kartaa hab eber-tayada qaab beddelidda. Taasi waxay ka dhigan tahay qaab beddelidda waxaa lagu fulin doonaa on your source files aan kelmadaha. Sidaa awgeed, ilaalinta aad file asalka dhawrsan. Si kastaba ha ahaatee, haddii file MOV la encoded by codecs kale, waxa kale oo aad qabsato karaa koobin video ah si loo yareeyo tayo lagu waayay diinta.
1 dar files QuickTime MOV in MOV in ay Converter TV
Hit ah Files Add button xitaa iyada oo aad tusaha maxalliga ah iyo kuwa keeno files QuickTime ama fiidiyo QuickTime MOV aad jeclaan doonaa si loogu badalo. ( Talooyin : Barnaamijkan ayaa sidoo kale taageertaa feature jiitaa-iyo-hoos u dhac iyo sidoo kale hab diinta Dufcaddii sahlo diinta).
2 Dooro TV qaab socon sida wax soo saarka
Riix Qaabka Output ah si ay u helaan wax ka badan oo ah qaabab ay taageerayaan. Halkan, waxaad yeelan doontaa si aad u aragto kala duwan oo ka mid ah fursadaha ama presets filaayo in qalabka gaarka ah. Waxaad dooran kartaa ka SD saarka sida wmv, MPEG-2 ama VOB ah, si ay u HD qaab video sida MKV ah, TS iyo Haddii aad rabto in aad u ciyaaro TV Apple ah, si fudud u dooro presets ku saabsan qaybta qalabka iwm. The TV Apple, Apple TV 2 iyo Apple TV 3 ayaa dhamaantood la siiyaa.
Haddii loo baahdo, waxaad riixi kartaa Dejinta badhanka si ay ula qabsadaan heerka xoogaa ah, heerka jir ama xal gacanta. The goobaha dheeraad ah idiin xaqiijin karaa inay diinta ka tayo fiican.
3 bilow diinta QuickTime MOV inuu ciyaaro TV
Hit Beddelaan on geeska midig ugu hooseysa interface ka furmkidoona MOV in ay diinta ka TV-ga. Hadda, aad dib u fariisan karo oo uga tago MP4 in ay Converter TV dhammayn off diinta aad u.
Ka dib qaab beddelidda, aad wareejin karaan faylasha gal wadid aad u adag oo ka dibna u ciyaaro daafaca aad LCD via HDMI ama cable USB.
Talooyin ku ciyaaro Back QuickTime MOV Files on TV
Fiiro gaar ah : The Converter Video sidoo kale awood u aad u gubi file MOV QuickTime ah in DVD ah inuu u ciyaaro aad DVD guriga ciyaaryahanka. Guji ee Gubashada menu on top of interface ka dibna ku shuban files MOV aad jeclaan doonaa si ay u gubaan ah. Waxa kale oo aad ku shuban karto audio kale ama sawiro haddii loo baahdo. Ka dib markii in, ka dooro template aad jeceshahay si ay u gubaan files MP4 eee DVD ah loo maqli karo TV istareexsan. Ka hor inta gubanaya, waxaad sidoo kale riixi kartaa More badhanka si ay u doortaan caadiga ah TV-ga, sidoo kale NSTC ama Pal roon baahida loo maqli karo si aad u adeegaan.
Fadlan halkan ku lifaaqan nuqul ka mid ah tutorial video ee laguugu sahlo.
Download Free of MOV in ay Converter TV:
> Resource > Video > Sida loo Play Quicktime MOV Files on TV (Samsung TV Mid)